Weelearn ၏ဆောင်ပုဒ်: ကိုကွညျ့ရှုလေ့လာပါ
Posted by ကို Tranquillus | ဇူလိုင်လ 11, 2018 | အွန်လိုင်းသင်တန်း
Weelearn ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေး, သုခချမ်းသာ, စိတ်ပညာနှင့်ပညာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးခေါင်းစဉ်တခုတခုအပေါ်မှာအွန်လိုင်းဗီဒီယိုသင်တန်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပလက်ဖောင်း Weelearn ၏တည်ထောင်ခြင်း
2010 ခုနှစ်တွင် Ludovic Chartouni ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဆောင်ပုဒ်အပေါ်ဖတ်နေစာအုပ်တွေသို့လွှတ်တင်။ Christophe အန်ဒရီတို့က: ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတစိတ်ဝင်စားတယ်, သူက "ပျော်ရွှင်မှု၏စိတ်ပညာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခြင်း" ဟုအထူးစာအုပ်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိအပြိုင်ဗီဒီယိုအားမီဒီယာများ၏မြင့်တက်သတိပြုသူကဗီဒီယို၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူစာစောင်၏ပေါများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံပေါင်းစပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်သူသည် XV အတွက် (ပဲရစ် createde ခရိုင်) နှစ်ခုစိန်ခေါ်မှုများစတင်ဖြင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်း Weelearn: စျေးကွက်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်တီထွင်ဖို့ဘယ်လို? အဘယ်သို့ယုံကြည်စိတ်ချလေ့ကျင့်ရေးဗီဒီယိုများလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးစာရေးဆရာများ?
လေးနှစ်အကြာမှာတော့ Ludovic Chartouni က၎င်း၏စိန်ခေါ်မှုအတွက်အရာ၌နန်းထိုင်နှင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သူကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြား Boris Cyrulnik သို့မဟုတ် Jacques ရှာလုံရေတွက်ကြပါပြီဂုဏ်ယူသည်။
ဒီဘာသာရပ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ကြောင်းအများအပြားဆိုဒ်များရှိပါတယ်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတစက်မှုလုပ်ငန်းသို့ချိုးဖျက်ဖို့ကျနော်တို့အနေနဲ့ဆန်းသစ် concept ကိုရှာတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဂိမ်းမှာအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမူရင်းထောင့်ကိုရှာတှေ့ခဲ့ရတယျ။ ဒါဟာစိတ်ကူးစာအုပ်၏စည်းစိမ်နှင့်ဗီဒီယိုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေါင်းစပ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းသင်တန်းနှင့်အမျိုးမျိုးလဲ tutorial ၏ပြည့်ဈေးကွက်မှာ, အလားအလာဖောက်သည်လှည့်ဖြားသောချဉ်းကပ်နည်းကိုရှာဖွေမရှိမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်တော်မူသည်ရွေးချယ် option ကိုသုံးအရေးပါသောနှင့်အတူကျန်းမာ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စိတ်ပညာတို့၏ဒေသများရှိချင်းစီလေ့ကျင့်ရေးဗီဒီယိုများများကိုဖြစ်ပါသည်:
သင်တန်း Weelearn အဘယ်သူနည်း
အဆိုပါ Weelearn လေ့ကျင့်ရေးဗီဒီယိုများအားလုံးအသက်အရွယ်အပေါင်းတို့နှင့်လူမှုရေးအမျိုးအစားလုံးဝလူတိုင်းအတွက်, ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဖုံးလွှမ်းအများအပြားသည့်အကြောင်းအရာများအနက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူတိုင်းဘောင်းရှိပါတယ်။
ထိုသူအပေါင်းတို့မှလက်လှမ်းဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာအဆိုပါဗီဒီယိုများဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ၎င်း၏လယ်ပြင်၌အသီးအသီး - - သူတို့ကယ့်ကိုကျွမ်းကျင်သူများကရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပါဝင်ပတ်သက်, သူတို့ uninitiated မှနားလည်နိုင်မယ့်ဘာသာစကားကိုကိုင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါတိကျတဲ့ဗန်းစကားသင်တန်းကိုပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
ဖတ်ရန် Maxicours: စျေးပေါအွန်လိုင်း tutoring ၏ရည်ညွှန်း
အဆိုပါ Weelearn လေ့ကျင့်ရေးဗီဒီယိုများအသေးစားသို့မဟုတ်ပိုကြီးသောအုပ်စုများအတွက်၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပေမည်သူကိုကုမ္ပဏီများအတွက်လည်းဖြစ်ကြသည်။ ပို. ပို. ကုမ္ပဏီများမှကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတသဘောပေါက်ပြီ, ကျန်းမာနှင့်စိတ်ပညာသူတို့ရဲ့တံခါးကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်တန့်ကြောင်းဘာသာရပ်များမဟုတ်ပေမယ့်ဒီကသူတို့ကိုထိခိုက်စေသည်ဟုကိစ္စများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကပျော်ရွှင်န်ထမ်းတစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ပါသည် ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော။ ထို့ကြောင့်အချို့ကုမ္ပဏီများကသူတို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဖိစီးမှုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ်အချို့သောသူတို့၏အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများ, ကျော်လွှားကူညီပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့န်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးကမ်းလှမ်းရန်ကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါစပီအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏ရွယ်တူများကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ သူတို့လူထုစကားပြောနှင့် addressing အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောလေ့အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ကိုလညျးတတျကြှမျးနေကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အသိပညာ, ၎င်းတို့၏အခွက်တဆယ်ဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကို popularize ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုအဘို့ဖြစ်၏, သူတို့ကရှေးခယျြခဲ့ကြပါလျှင်, ၎င်းတို့၏အကြားအာရုံကိုလမ်းပြဖို့သင်ယူခြင်းခံရဖို့ကိုဘယ်လိုသိကြနှင့်။
စာရေးဆရာများ၏ရွေးချယ်ရေး Weelearn ၏အောင်မြင်မှုကိုအဘို့အများအားဖြင့်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်း၏တည်ထောင်သူ Ludovic Chartouni, ကောင်းစွာသိလျက်အစဉ်မပြတ်အဘယ်သူ၏နာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့အခွက်တဆယ်င်း၏ဗီဒီယိုကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းအများအပြားအနာဂတ်အောင်မြင်မှုများစေမည်သစ်ကိုကစားသမားရှာဖွေနေသည်။
လေ့ကျင့်ရေး Weelearn ၏ဗီဒီယိုများ၏အကြောင်းအရာကဘာလဲ?
အဆိုပါဗီဒီယိုများဖုံးလွှမ်းဘာသာရပ်များ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏သီအိုရီချဉ်းကပ်နည်းကိုဆက်ကပ်။ သူတို့ဟာchapitréesဖြစ်ကြပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ဿုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စာဖြစ်ရေတို module တွေသို့ခုတ်ဖြတ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း Weelearn သူတို့၏နယ်ပယ်များတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ကထိကအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါသဘောပေါက်အကျိုးစီးပွား generate နှင့်ကြည့်ရှုသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပြောင်းလဲနေသောဗီဒီယိုများဖြစ်ပါတယ်။ အသံ, ဂရပ်ဖစ်နှင့်စာသားတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရလဒ်ရရှိရန်ရောနှောလျက်ရှိသည်။ ဗီဒီယိုရုပ်ပုံများကို၏သက်ရောက်မှုနှင့်စာအုပ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံပေါင်းစပ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုထဲမှာ embedded စာသားကိုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေမှန်မှန်ရေးသားသူအားဖြင့်ဖော်ပြထားသောအဓိကအချက်များကိုသတိပေးတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုဗီဒီယိုတိုးမြှင်သင်ယူမှုများအတွက်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, အမြင်အာရုံအကူအညီအထောက်အပံ့များကို ... အတူဆုကြေးငွေပါရှိသည်။
အဆိုပါ site ကိုဿုံအလိုလိုသိသည်နှင့်သင်အလွယ်တကူရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အပြင်, သငျသညျအမည်ရ, သင့်စွန့်ပစ်ခြင်းမှာသင်လေ့ကျင့်ရေးအမျိုးအစားပေးသည်တဲ့ menu ကိုရှိသည်:
သင်လုပ်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုကို tab ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်လေ့ကျင့်ရေးအပေါငျးတို့သအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူ:
တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ module တစ်ခု၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူအကျဉ်းချုပ်,
လေ့ကျင့်ရေးမယ့်စာအုပ်ငယ်ကမ်းလှမ်းလျှင်သတ်မှတ်ဖို့အရိပ်အယောင်, ဆုကြေးငွေ, ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများကို ...
Weelearn ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအကျယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောပရိသတ်ကိုရောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်, ဗီဒီယိုသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များ၏ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့် Groupon ဟာ Francophone ကမ္ဘာအနှံ့က၎င်း၏လေ့ကျင့်ရေးကိုအားပေးအားမြှောက်။
ထို့အပြင်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့် box ကိုအခမဲ့နှင့်လိမ္မော်ရောင်တစ်ဦး string ကိုအပေါ်ယူသွားတတ်၏။
အကြီးစားကုမ္ပဏီများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသာအကောင်းဆုံးဟုလူသိများနာမတော် Bouygues Telecom နှင့်လိမ္မော်ရောင်အပါအဝင်အချို့သင်တန်းနှင့် Weelearn လေးလည်းနေကြသည်။
Weelearn.com အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသော, တစျရာကျြောသင်တန်းများတစ် catalog ပေးထားပါတယ်။ € 19,90 များအတွက်သင် 1h2 မှနောက်ဆုံး 30h သည်ဤဗီဒီယိုများတဦးတည်းကိုဝယ်ကြလော့။ ပြီးတာနဲ့ဝယ်ယူ, သူတို့ကကွန်ပျူတာ (Mac အတွက်သို့မဟုတ် PC) ရက်နေ့မှာချက်ချင်းန့်အသတ် streaming များနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်, တက်ဘလက်နှင့်စမတ်ဖုန်း။
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမပေးအပ်ပါလိမ့်မည်, ဒေါင်းလုတ်လုပ်နှင့်မည်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, CD သို့မဟုတ် USB မှတ် key ကိုမှသို့သော်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Weelearn နှစ်ခုန့်အသတ်ကြေးပေးသွင်း packages များပေးထားပါတယ်။ သင်ကလတိုင်းဖြည့်စွက် သိ. အားလုံးသင်တန်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ တဦးတည်းကလစ်နှင့်အတူ, သငျသညျနှုတ်ထွက်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ, အဆိုပါသက်တမ်းတိုးအော်တိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ subscriptions ကို Non-စည်းနှောင်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်လများအတွက်န့်အသတ် subscription ကိုတစ်လလျှင်€ 14,90 ရန်, € 9,90 ရန်နှင့်အပြည့်အဝတစ်နှစ်ပမာဏသည်။ သငျသညျဤဝန်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်ခုတည်းကဗီဒီယိုကိုရှေးခယျြနိုငျသျောလညျးသငျသညျဒုတိယကနေအရသာယူလျှင်, လစဉ်ကြေးပေးသွင်းထားပြီးအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရန် Alphorm, အိုင်တီသင်တန်းယခုအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်
Weelearn က၎င်း၏ပရိသတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်မြင်ကြ။ အသုံးပြုသူများသည်ကနဦးအတိုးများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ခေါင်းစဉ်မှဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ ယင်းပုံသေနည်းအားဖြင့်တို့ကိုလှည့, သူတို့ကတခြားလေ့ကျင့်ရေးကိုရှေးခယျြနှင့်ပလက်ဖောင်းမှသစ္စာစောင့်သိဖြစ်လာသည်။
ထို့ကြောင့် Weelearn အမြဲပိုပြီးသစ်ကိုကိစ္စရပ်များကိုတိုးတက်နှင့်၎င်း၏လေ့ကျင့်ရေး catalog ကိုချဲ့ထွင်ရန်ရှာဖွေနေ။
တဖန်သင်တို့ကိုရေးသားသူ Weelearn ဖြစ်လာလျှင်?
ဒါကပလက်ဖောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးအဘယ်အရာကိုပါ! အမြဲတမ်းအသစ်ကစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်သန့်စင်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေနေ, Weelearn ကိုမဆိုအဆိုပြုဖို့ပွင့်လင်းဖြစ်နေဆဲပင်။
သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဧရိယာထဲမှာနည်းပြ, စိတ်ပညာရှင်စာရေးဆရာသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်အမြဲသူ့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေး catalog ဖြည့်စွတ်ကြောင်းလူတွေဖြည့်ဆည်းရန်ရှာနေသော Weelearn ပလက်ဖောင်းကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်အချို့သောအခြေအနေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သင်တန်းရပါမည်။ သငျသညျခိုငျမာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးဆက်စပ်သောတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဒေသများရှိကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံ, ကျန်းမာ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, စိတ်ပညာသို့မဟုတ်ပညာရေးရှိရမည်။ သငျသညျဿုံသင့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သင့်လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်သင့်သည်။
အားလုံးသင့်ရဲ့နောက်ထပ်အလုပ်သင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်ငြင်းခုန်။ သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အထွေထွေအများသုံးဖြစ်ပြီး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်အများပြည်သူတို့အတွက်ပို့ချချက်ပြုမိကြပေမည်။ သငျသညျလေးနက်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုအိမ်များတည်းဖြတ်ခဲ့ကြပေမည်။
သငျသညျကိုစနစ်တကျနှင့်လူအပေါင်းတို့အားလက်လှမ်းလေ့ကျင့်ရေးကွိုတငျပွငျဆငျနိုငျခဲ့ဖြစ်ရမည်။ သင်သည်သင်၏ဘာသာရပ်ကိုသိရန်နှင့်သင်၏စကား popularize ပါဘူးတဲ့အများပြည်သူသင်သိရန်ရှိသည်။ Weelearn ဂုဏ်ထူးမပါဘဲ, သူ့လုံးဝစိတ်ဝင်စားလူတိုင်းလေ့ကျင့်ကြောင်းသတိထားဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်း၏ CV ကိုအားလုံးအလေး element တွေကိုသင် Weelearn ၏စွန့်စားမှုတွင်ပါဝင်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျကင်မရာနှင့်တစ်ဦးပရိသတျမကျြနှာကိုစကားပြောဿုံအဆင်ပြေများမှာလိုအပ်ပါတယ်။
ယခုတွင်သင်သည် Weelearn အကြောင်းကိုအရာရာကိုသိရန်နှင့်သင်သည်သူတို့၏ catalog browse သင်ပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းသောအရာကိုတစ်ဦးကွန်ကရစ်စိတ်ကူးပေးရဗီဒီယိုများကောက်နှုတ်ချက်စောင့်ကြည့်ဖို့ကသူတို့ရဲ့ website သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Weelearn ၏ဆောင်ပုဒ်: ကိုကွညျ့ရှုလေ့လာပါ ဇူလိုင်လ 14th, 2018Tranquillus